“Messi oo kale ma imaan doono 40-ka sano ee soo socota” – Antoine Griezmann – Gool FM
“Messi oo kale ma imaan doono 40-ka sano ee soo socota” – Antoine Griezmann
Dajiye November 25, 2019
(Barcelona) 25 Nof 2019. Weeraryahanka Barcelona ee Antoine Griezmann ayaa amaaney saaxiibkiis ay isku kooxda yihiin ee Lionel Messi, isagoo ku tilmaamay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka.
Dhinaca kale weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann ayaa sheegay inuusan imaan doonin sanado badan ee hadda kaddib xiddig la mid ah Lionel Messi.
Griezmann ayaa xagaagii hore Barcelona kaga soo biiray kooxda Atletico Madrid aduun dhan 120 milyan oo euro, balse ilaa iyo haatan sida la rabay u lama qabsanin kooxda.
Yeelkeeda, waxaa jira warar saxaafadeed ku saabsan in Antoine Griezmann uusan xiriir wanaagsan ka dhaxeynin isaga iyo Lionel Messi, kaasoo ah ciyaariyahanka ugu muhiimsan. qolka labiska ee kooxda Barcelona.
Laakiin hadalada Antoine Griezmann ayaa waxay u muuqdaan inuu aad ugu faraxsan yahay ka garab ciyaarista xiddiga 5 jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or, wuxuuna beeniyay wararka sheegaya inuu jiro khilaaf ka dhexeeya isaga iyo Messi.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Antoine Griezmann waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa ciyaaryahan aanan waligeen arki doonin mar kale 40-ka sano ee soo socota, kaliya waxaan ku raaxeysan karnaa kubaddiisa”.
“Haddii aad tahay saaxiibkiis kooxda, ama aad fadhiso qeybta tarbuunka ama aad tahay macalinkiisa, waa inaad ku raaxeysataa kubaddiisa, sababtoo ah waxa uu ka sameynayo kubadda waa wax aan la rumeysan Karin”.
“Farxad ayeey ii tahay inaan ka garab ciyaaro, isla markaana aan arko isagoo ku ciyaaraya meel aniga aad iigu dhow”.
Muxuu ka dhignaa goolkii uu xalay Mason Greenwood u dhaliyey Kooxdiisa Manchester United kulankii Sheffield?
Gary Neville oo saddex xiddig oo ka tirsan Man United ugu yeeray kuwo lagu qoslo intii lagu guda jiray kulankii xalay ee Sheffield United